Jackie Huang dia mitondra ny toetra amam-panahy Disney ho an'ny taratasy | Famoronana an-tserasera
Izahay dia mizara mpanakanto isan-karazany amin'ny taratasy tahaka azy predilection ho fitaovana maneho hevitra. Jackie Huang dia mpanakanto manan-talenta iray hafa izay manana taratasy ho fitaovana ankafiziny amin'ny famoronana asa avo lenta.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiasa taratasy izy mba hampifoha azy endri-tsoratra disney mampiavaka izay ahitantsika an'i Anna sy Elsa avy any Frozen na ny hatsaran-tarehy avy amin'ny Beauty and the Beast. Mampiasà taratasy voapaika ho toy ny sosona hamoronana vokatra tena manaitra izay azo jerena miaraka amin'ny valiny lehibe amin'ireo sary nozaraina tamin'ireto tsipika ireto.
Huang tenany no naneho hevitra ny amin'ny fitiavany azy mampiasa fitaovana izay ampiasain'ny tsirairay saika isan'andro hanovana azy ho asa-kanto kely toa ireo fanehoana ny endri-tsoratra malaza toa an'i Cinderella na Rapunzel.
Amin'ny fananana a fahatsapana habaka lehibe Ao amin'ny 3D, ny fampiasana taratasy misy sosona dia nahafahany nanova ny tarehin-tsoratra Disney ho lasa andian-dahatsoratra mahatalanjona izay manome endrika tsara sy fahaiza-manao tena tsara.
Izy tenany ihany no milaza ny fomba mitadiava aingam-panahy amin'ny toerana isan-karazany toy ny sary mihetsika, lamaody, fonosana na bokin-jaza. Raha ny zokiny indrindra dia nahita izany tamin'ny fotoana niainany. Mpanakanto taratasy iray izay mampiseho amintsika ny fomba fampiasana fitaovana mahazatra toy izany mba hanamboarana tarehimarika nahavita be toa an'i Elsa tenany miaraka amin'ny volon-dohany ary ireo fanapahana izay milatsaka tahaka ny volony izay mamorona randrana mahafinaritra an'io toetra io amin'ity takelaka ity.
Anananao ny azy tranokala manokana, Facebook e Instagram for araho ny asany ary ireo tetikasany manaraka izay tsy misy ifandraisany amin'ny taratasy. Paperholm Mety ho tetikasa hafa izy io izay ahafahanao mahazo aingam-panahy hahafantatra tanàna iray manontolo noforonina tamin'ny taratasy nataon'ny mpanakanto hafa akaiky.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Iconic Disney Character Namboarina tamin'ny taratasy nataon'i Jackie Huang